Wasiirka Maaliyadda Puntland Dr Cabdullaahi Shiikh Axmed oo u kuurgalay Xaaladda Isbitaalka iyo Airporka Bosaso[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
Wasiirka Maaliyadda Puntland Dr Cabdullaahi Shiikh Axmed oo u kuurgalay Xaaladda Isbitaalka iyo Airporka Bosaso[Sawirro]
March 18, 2016	in Warka
BOOSAASO – Wasiirka Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Dr Cabdullaahi Shiikh Axmed ayaa booqasho ku tagay Isbitaalka weyn ee magaalada Iyo garoonka diyaaradaha ee Boosaaso.
Mudane Dr Cabdullaahi Shiikh Axmed ayaa booqashadiisa ,waxaa ku weheliyey Guddoomiyaha gobolka,kan degmada Bosaso iyo xubno kale.
Wasiirka Maaliyadda Puntland ayaa ugu horeyn tagay Isbitaalka Bosaso ,isagoona kormeeray qeybaha uu ka kooban yahay isla markaana xaaladooda ka wareystay bukaanada ku jira Isbitaalka.
Wuxuu booqday oo kale Mudane Dr Cabdullaahi Shiikh Axmed iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha ee magaaladda Boosaaso,isagoona la kulmay mas’uuliyiinta isla markaana kormeer ku sameeyey qeybaha uu ka kooban yahay.
Kormeerka ka dib ayaa Wasiirka Maaliyadda Puntland Dr Cabdullaahi Shiikh Axmed ,wuxuu kulan la yeeshay saraakiisha garoonka ,iyagoona uga warbixiyey xaalada amniga ee garoonka.
Wasiirka Maaliyadda oo Jaaliyadda Puntland ee Waqooyiga Denmark uga Mahadnaqay Deeqda ay soo gaarsiiyeen ciidanka [Daawo]
Tababar socday Shan maalmood oo lasoo Gabagabeeyey Ciidamada illaalada Wadooyinka ee Taraafikada gobolka Bari(Sawirro)